Ngwaọrụ ịsa ahụ na gburugburu ebe obibi na ịkwado ịkwanyere gburugburu ebe obibi ùgwù | Akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ Green
Daniel Palomino | | Nchekwa ike, General, Gburugburu, Teknụzụ ọhụrụ
Igwe eji asa akwa, ngwa ahụ ka anyị n’eji eji asa akwa na-ebute oke mmetụta gburugburu ebe obibi Ọ bụ ezie na OCU (Organizationtù Ndị Ahịa na Ndị Ọrụ) nwere ụfọdụ ndụmọdụ, ndị a abụghị ihe niile.
Ngwaọrụ a nwere ihe eji agbanwe agbanwe, nke a pụtara na ọ na-erichapụ maka ihe ọ na-asa ma otu n'ime ndụmọdụ OCU bụ imejupụta akwa ịsa akwa ahụ nweta mbelata dị ukwuu na ego nke mmiri na ọkụ eletrik, 2 nke ihe atọ dị oke mkpa na igwe igwe.
Ntụnye ha bụ n'ụzọ dị mkpa n'oge nzụta ebe anyị kwesịrị iburu n'uche ikike kachasị ịrụ ọrụ na klas eletrik ma ọ bụ arụmọrụ ike.
La ike kacha enwere ike ichikota ya:
Maka nnukwu ezinụlọ (karịa mmadụ 4): Igwe na-asacha igwe nwere ikike ibu ihe ruru 9 n'arọ.
Ezinaụlọ dị ọkara: (mmadụ anọ): Igwe na-asacha igwe nwere ike ibu ihe ruru kilogram asatọ.
Maka mmadụ 2 ma ọ bụ 3: Igwe igwe na-ebu ibu ruo 7 n'arọ.
Site na mmadụ 1 rue 2: Igwe igwe na-ebu ibu nke ruru 6 n'arọ.
Ma ndi di klas eletrik (Nke ahụ doro anya ga-ada gị) bụ ịdebanye aha nke ngwa ụlọ nke iji iwu mee ihe na Europe dum sitere na arụmọrụ kachasị mma:
Na oriri dị elu:
Na weebụsaịtị OCU ị nwere ike ịchọpụta banyere igwe ịsa ahụ nke kachasị mma maka mkpa gị ma tulee ha dabere na njirimara ndị a yana doro anya ọnụahịa ahụ. Pịa ebe a ịhụ onye na-atụ OCU.
Mana ihe ahụ akwụsịghị ebe a, otu n'ime ihe ndị a kpọtụrụ aha na-akpata oke mmetuta gburugburu ebe obibi bu oriri nke mmiri, gabigara ókè, maka ịsacha ọ bụla.
Igwe igwe asa nwere ike iri ihe 200 lita mmiri maka ibu zuru ezu.
Na mgbakwunye, enwere ụdị igwe nsị 2, ndị nwere ibu dị elu na ndị nwere ibu ihu, nke mbụ bụ ndị na-ehicha mmiri nke na-eri oke mmiri, ebe nke abụọ nwere ike imefu ihe dị ka lita 7 na 38 maka kilogram 91.
1 Ngwaọrụ ịsa ahụ ebe obibi
1.1 "Ndị anamachọ ihe" maka igwe ịsa ahụ ebe obibi
1.1.1 Machinesdị igwe ịsa ụlọ
1.1.1.1 Na ahịa Spanish
1.1.1.1.3 Mmiri Whirlpool-Steam
1.2 Igwe igwe na-ekpocha ebe obibi
1.2.1 Drumi na GiraDora
1.2.2 Bicilavadora na igwe igwe kwụ otu ebe (ụdị nke izizi).
1.2.3 Hula Na-asacha. Igwe igwe asacha na okpu
1.2.4 Washup. Machinesa igwe-ụlọ mposi
1.2.5 Na-asacha. Igwe ịsa ahụ na igwe ịsa ahụ n'otu oge
1.2.6 Mmiri Wheel Machinesa Machine
1.2.7 Dolfi, saa uwe site na ultrasound
2 Ngwa, ihe nke atọ dị mkpa na ịsa akwa
Ngwaọrụ ịsa ahụ ebe obibi
Ezigbo igwe eji ehicha "ebe obibi" abughi otu i chere n'echiche ha, igwe ihe nhicha nke di ugbua nke na ewepita okara ma obu obere elektrik na mmiri n'ihi na o bu "enyi na enyi".
Onwe ya, enwere igwe nchacha aru nke apuru iweta ihe obibi na nke obibi.
Maka ugbu a, anyị na ndị mbụ na-aga, ndị a na-ahụta ebe obibi.
"Ndị anamachọ ihe" maka igwe ịsa ahụ ebe obibi
A na-ahụta igwe igwe dị ka ebe obibi n'ihi na ọ na-ezute usoro ntuziaka, ma na arụmọrụ ya na imepụta ya.
Nke mbụ bụ na Ikwesiri iri ihe dị ka lita 15 mmiri maka kilogram ọ bụla. A ghọtara saa a na ogologo oge (maka owu) na mmiri ọkụ.
Na oge ị na-asacha, nchekwa ego gị kwesịrị ịbụ 0.23 KW / h ma kwa kilogram ọ bụla.
Na ngwụcha, anyị ga-eburu n'uche ihe eji eme igwe eji asacha ya ebe enwere bioplastics enwere ike iji rụpụta ya.
N'ụzọ dị otú a, ihe ọkụkụ CO2 na-ebelata na mgbakwunye na inwe mmetụta dị oke mkpa gburugburu ebe obibi dịka ọ bụ ihe na-emebi emebi.
N’aka nke ọzọ, ọ bụrụ na anyị ga-azụta igwe igwe ma ọ bụ ngwa ndị ọzọ, ebe anyị bụ ndị na-eri ihe, anyị kwesịrị itinye n’uche akara ike, nke m kwuru na mbụ.
Ọ bụghị naanị na ọ ga-agwa anyị maka ike arụmọrụ nke ngwa ahụ, mana ọ ga-enye anyị ike ụda, ma na oge ịsa ahụ na oge ntụgharị, na-ezere mmetọ mkpọtụ na mkpesa nke ụfọdụ ndị agbata obi.
Machinesdị igwe ịsa ụlọ
N'oge a, m ka nwere ihe a na-ewere dị ka igwe na-asa igwe na ọ bụ na n'ime klaasị igwe igwe a, anyị nwere ike ịchọta ụdị na ụdị dị iche iche.
Dịka ọmụmaatụ, anyị nwere ike ịchọta igwe igwe anaghị achọ mmiri maka ọrụ ha dịka ụfọdụ LG.
Ọ malitelarị ngwaahịa ndị dị ka LG Styler, akwa mkpuchi akwa na-egbu oge n'otu oge nke na-enye anyị ohere iwepụ isi ísì ọjọọ mana oge a LG agafeela n'ihu ma gosipụta igwe ịsa ahụ a, na mgbakwunye na iwepu isi ahụ uwe ga-ehicha anyị.
Nhazi ahụ abụghị ihe ọhụụ ma ọ dabere n'echiche ụfọdụ ụmụ akwụkwọ si National University of Córdoba, na Argentina.
Mụ akwụkwọ a mepụtara Nimbus nlereanya, nke na-arụ ọrụ na eke CO2 na biodegradable omo.
Usoro ịsa ahụ na-ewe ihe dị ka nkeji 30 na carbon dioxide nke igwe na-eji emegharị ugboro ugboro n'ime igwe.
N’ịgbaso otu usoro ahụ, LG rụpụtara igwe nke ya, ọ bụ ezie na ọ bụghị ugbu a na ahịa, mmalite ya dị na obere oge.
N'aka nke ọzọ, na-ererịrịrị na United Kingdom na United States, anyị na-ahụ igwe igwe na-asacha ika Xeros. Igwe ọrụ ịsa ahụ a nwere ike iji ihe karịrị otu iko mmiri saa uwe anyị.
Iji mezuo nke a, were ụfọdụ pellets plastik ndị a na-etinye n'ime igwe ịsa ahụ, tinyere iko mmiri ma mgbe ha na-ehicha ha na uwe n'ihi mmegharị nke ịgbà ahụ, ha na-enwe ike ihicha unyi ma wepụ ntụpọ.
Bọọlụ ndị a, dị ka ọka osikapa n'ibu enwere ike iji ya rụọ ọrụ 100 ugboro na igwe nwere ngwaọrụ nke na-achikota ha na ngwụcha nke usoro ncha ọ bụla. Na mgbakwunye, ha anaghị egbu egbu ma ghara ịkpata ụdị nfụkasị ọ bụla.
A na-anwale ha ugbu a na nke ọma na Hyatt nkwari akụ.
Na ahịa Spanish
Na Spain anyị nwere ike ịchọta igwe igwe dị ka Samsung Ecobubble, Hotpoint, Aqualtis ma ọ bụ ụdị Whirlpool Aqua-Steam.
Igwe igwe nhicha a jiri ya tụnyere nke ọzọ nke otu ụdị mana nke ụdị dị iche iche, anaghị enweta nsonaazụ ka mma ma ọ bụ na ike ma ọ bụ ịsacha arụmọrụ dịka ọmụmụ nke OCU.
Modelsdị ndị a nwere sistemu arụmọrụ ike A ++ na mgbakwunye na arụmọrụ dị mma.
N'otu aka ahụ, a na-arụpụta ha site na plastik emeregharị emegharị nke enwetara site na refrjiraeto ochie na igwe igwe, na-ebelata oke anwuru CO2 na nrụpụta ha.
Kpọmkwem, ha wepụtara usoro 6769 na-ekwe nkwa nchekwa mmiri kachasị 35% na mgbakwunye arụmọrụ A ++.
Igwe igwe na-ekpocha ebe obibi
Ugbua aga m egosị gị igwe eji asa ahụ nke nwere ihe dị mkpa na gburugburu ebe obibi, ị ga-aghọtakwa ihe kpatara m jiri dị iche n ’otu na nke ọzọ.
Drumi na GiraDora
GiraDora bu ihe nchoputa nke ihe eji ekpochapu ihe na ihe nhicha nke ufodu umu akwukwo no na Peru ma emebe ya ka ndi mmadu nwee ike inodu ya wee saa ma kpocha uwe ha site na ighari uzo.
Igwe igwe GiraDora
Igwe e ji asa ihe nke bekee abụrụla ihe osise maka Drumi, nke amalitegoro n'ahịa ya ma nwekwuo "ọkaibe" mana yana otu arụmọrụ ahụ.
Ha na-enwe ike ịsa uwe 6 ma ọ bụ 7 na-ewe ihe dị ka lita mmiri 5.
Ha abụọ nwere nnukwu elele dịka mmega ahụ, nchekwa ike yana n'ezie, Mbelata akara ụkwụ carbon.
Drumi saa igwe
Bicilavadora na igwe igwe kwụ otu ebe (ụdị nke izizi).
Bicilavadora nwere nnukwu ikike na mpaghara ime obodo ebe a ka ji aka na-asacha uwe. A na-eji ịnyịnya ígwè enwe ike ịkwaga ịgbà nke igwe ịsa ahụ na-enweghị ọkụ eletrik.
N'aka nke ozo, igwe igwe igwe igwe di otua na nke mbu mana ya na odi iche na o kariri nma ma nwekwa onu ahia obula na onwere oru dika nke mbu.
Ọ bụ ụmụ akwụkwọ China si Dalian Nationalities University mepụtara ya.
Hula Na-asacha. Igwe igwe asacha na okpu
Ejiri igwe injin Electrolux mebere igwe a. Igwe igwe ihe a nwere hula hoop nke na-eme anyi obi uto ma na-echekwa anyi oghe ka anyi we saa uwe anyi.
Ọ naghị ere ọkụ eletrik, ịsa ahụ na-eji ike nke anyị na-enye mmegharị ahụ anyị eme ihe.
Naanị tinye nchacha ma bido ịtụ ogho!
Mgbe ahụ anyị nwere ndị chọrọ iji ọtụtụ ego nchekwa mmiri site na itinye usoro ịmegharị ihe dịka:
Washup. Machinesa igwe-ụlọ mposi
A ngwakọ ngwakọ n'etiti igwe na ụlọ mposi iji nweta na anyị na-eri obere mmiri.
Ọrụ ya dabere na ijikọ mmiri nke igwe ịsa ahụ na ntinye mmiri nke ụlọ mposi, nke mere na mmiri niile nke lara n'iyi ugbu a mgbe ị na-asacha, ga-eji ya kpochapụ agbụ ahụ.
Na-asacha. Igwe ịsa ahụ na igwe ịsa ahụ n'otu oge
Sholọ ịsa ahụ na igwe ịsa ahụ n'otu oge. Nhazi ya ga - enyere anyị aka iwere mmiri ịsa ahụ ịsa akwa.
Na n’ikpeazụ, ọdịiche doro anya nke ịsa uwe na ejiji ochie ma ọ bụ imezi onwe gị.
Mmiri Wheel Machinesa Machine
Nzube ya dabere na wiilị mmiri ọdịnala ma ndị ọkachamara sitere na Mahadum China nke Jiao Tong mepụtara ya iji weta ịsa ahụ na-adigide na obodo ebe ha ka na-enweghị ọkụ eletrik.
Dolfi, saa uwe site na ultrasound
Dị ka ndị okike ya si kwuo, Dolfi na-ewepụ unyi site na usoro ultrasound ma jiri oge 80 dị obere karịa igwe igwe ọ bụla.
Naanị anyị ga-etinye uwe na mmiri, ihe na-erughị kilogram 2, obere nchacha na ngwaọrụ Dolfi. N'ime ihe dị ka minit 30-40 uwe anyị ga-adị ọcha.
Ngwa, ihe nke atọ dị mkpa na ịsa akwa
Ọ bụrụ na anyị tinyekwuo ihe na igwe ịsa ahụ, ọ bụghị naanị na ọ na-eme igwe nwere nsogbu, ma anyị na-eme a mmebi na-enweghị isi na enweghị isi na gburugburu ebe obibi.
Ọ bụrụ na ị nwere ọgwụ na-egbu egbu nke ukwuu, otu n'ime ihe ndị a ga-eme gị:
Isi siri ike mgbe ị na-emepe igwe ịsa ahụ.
Uwe na-egosi obere mmanu ma ọ bụ nwee nkwesi ike mgbe a na-akpụ ya.
Hụla ọdịdị nke obere nsị na ọnụ ụzọ nke ịgbà ahụ.
Ihe nzacha ahụ na-adịkarị ọcha mgbe ọ bụla ịsachara, enwere foduru.
Ajụjụ bụ isi ga-abụ ole omo-etinyeAgbanyeghị, enweghị ọgwụ kwesiri ekwesi n’ihi na ọ dabere n’ihe nhicha ahụ, igwe na-asacha ya, onye rụpụtara ya, afọ igwe, wdg.
Otú ọ dị, ndị ọkachamara na-akọwa:
“N'ozuzu, n'okpuru ọnọdụ nkịtị, mkpokọta nke 50 milliliters nke mmiri mmiri na-ehicha mmiri zuru ezu maka akwa akwa 4,5 n'arọ.
Ọ dịkwa mkpa ka ị ghara iji akwa mejue igwe ịsa ahụ ka ọ ghara ịdọka adọka. Adịghị eme usoro ihe efu, ma etinyela ibu karịa ihe akwadoro.
Ka o sina dị, ọ bụrụ na ị dị ka m, kpachara anya maka omume m iji lekọta gburugburu ebe obibi, nhọrọ ndị a maka ịsa akwa ga-adị mfe:
Zụta ihe na-ekpo ọkụ gburugburu ebe obibi, na-ezere kemịkal.
Kwadebe ihe eji eme ụlọ anyị nke eji mmanya ncha Marseille, mmanụ dị mkpa ka uwe wee na-esi isi ka anyị chọrọ yana iko mmiri iko. N'ihe na-erughị otu awa anyị nwere ike ịkwadebe ma jiri ya rụọ ọtụtụ ọnwa. Ngwọta akụ na ụba na obibi!
Dochie obere ihe nchacha akwa ahụ na obere apụl cider mmanya na mmanụ dị mkpa. Mmanya na-eji ọ bụghị naanị ka eji akwa salads, mana o nwekwara ike dị elu iji mee ka akwa dị nro.
Jiri ncha eke, nke ndụ gị niile.
Zere iji ịcha ọcha.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ Green » Teknụzụ ọhụrụ » Ngwaọrụ ịsa ahụ na gburugburu ebe obibi na nkwanye ugwu ịkwanyere gburugburu ebe obibi ùgwù
Kedu ihe ntụgharị nke ugbu a na gịnị ka ọ bụ?